China Beautiful Uyilo Home Garden Sebenzisa PC Greenhouse mveliso kunye nabenzi | IBonai
1. Phendula imibuzo yakho kwi-intanethi iiyure ezingama-24 ngelixesha lifutshane
2. Abasebenzi abanamava ukuphendula yonke imibuzo yakho
1. Siza kukwazisa ngemilinganiselo ethile kunye nemibala oyifunayo.
2. Sinokuvelisa iibhodi zepolycarbonate, kwaye sikulungele ukukunika ezinye iingcebiso ngolwazi lwakho.
(1) Idangatye-nekudodobalisa: Umgangatho we-GB50222-95 kazwelonke uqinisekisa ukuba ibhodi yePC ilitha eligcina ilangatye, oko kukuthi, ibanga le-B1. Indawo yokudlala ibhodi yePC ngama-580 degrees Celsius, kwaye iyakucima emva kokuyeka umlilo. Ayizukuvelisa irhasi enetyhefu ngexesha lokutsha kwaye ayizukukhuthaza ukusasazeka komlilo.
(2) ubhetyebhetye: Ukugoba okubandayo kunokusetyenziswa kwisiza sokwakha ngokomzobo woyilo, kwaye ungafakelwa kwi-arch, eluphahleni lwetyhula kunye nakwifestile. Ubuncinci bokuguqa irediyasi ngama-175 amaxesha obunzima beplate eyamkelweyo, kwaye ukugoba okushushu kunokwenzeka.
(3) Isambathisi sesandi: Ibhodi ye-PC inefuthe elicacileyo lokugquma, kwaye inesandi esifanelekileyo sokugquma kuneglasi kunye nebhodi ye-acrylic yobukhulu obufanayo. Ngaphantsi kobukhulu obufanayo, ukufakwa kwesandi kwibhodi yePC yi-3-4DB ephezulu kunale yeglasi. Ngaphakathi, zizinto ezikhethiweyo kwimithintelo yengxolo yendlela.
(4) Ukonga umbane: hlala upholile ehlotyeni kwaye ugcine ubushushu ebusika. Ibhodi yePC ine-conductivity esezantsi eshushu (ixabiso le-K) kuneglasi eqhelekileyo kunye nezinye iiplastikhi, kwaye isiphumo sayo sobushushu siyi-7% -25% ephezulu kunaleyo yeglasi. Ubushushu bufike kwi-49%. Ngokwenjenje, ilahleko yobushushu iyancitshiswa, kwaye isetyenziswa kwizakhiwo ezinezixhobo zokufudumeza kwaye yinto enobungozi kwindalo.
(5) Ukuziqhelanisa nobushushu: Ibhodi yePC ayizukubandezeleka kwi -100 ℃, kwaye ayizukuthanjiswa kwi-135 ℃, kwaye oomatshini bayo kunye neepropathi zoomatshini abayi kutshintsha ngokubonakalayo kwimeko ezibi.
Egqithileyo Umgangatho oPhezulu wePhepha eliPhakamileyo lePolycarbonate PC Sheet
Okulandelayo: Polycarbonate Plastic / Ulenze Sheet Izinto zokwakha